Wa'ee - Cloud Library
Mana - Wa’ee
Wa’ee Cloud Library
Haala keessa jiraanniif galii qabaan irratti i osoo hin hunda’iin, duraa buutota waldaa kirstaanaa fi gaggeessitoota waldaa akka isaan kitaabota gargaara ta’aan kanaa argataaniif Messenger International xiyyeeffannaa itti keenee adunyaa guutuu irratti hojeechaa jira. Clould libraryn sababa kaanaf hundeeffame. Kitaabota afaanota adda addaan hikaamnii jiraan akka isaan adunyaa maratti bittinnaa’anii fi namoonni buufachuu danda’an tajaajiluuf kan dhabatee dha.
Galmii keenya kitaaboonni kuni akka isaan afaanota adda addattiin biyyoota adda addaa irraa ga’aan dha. Akkasumas 98% namoota adunyaa cufa keessa jiraan waliin ga’uu dha. Cloud libraryn karaa nutti galama kanaa bakkaan ga’aanu dha. Akkamitti yoo jette gafatee? Debiin keenya wantoonni intarneetaan facaasaan haala saffisaa ta’een akka deemuu danda’u ta’u isaa dha. Isiin illee yoo cloud library amaleeffataan akka jalaachuu dandeessaan abdiin qaba.
Yesuus itti gafaatuuma wangeela lallabuu qofaa osoo hinta’in akka nutti duuka buutota isaa horachuu dandeenyu cufa wajjin malee, Kanaaf ergaan kuni akkaa nutti duuka buutota horannu dandeenyuuf nuu gargaara. Ayyaana waqayyoottiin namoota biroo irratti akka atti dhiibbaa afuura fiduu dandeessuuf akkasumas kennaa kee irratti akka amantaa qabachuu dandeessuuf sii lenjisuuf wantoota humni keenya danda’u hundaa goochuuf caarraqii guddaa goonaa. Waqayyoo wanta garii sii keessa ka’eera, waqayyoo kaleessaraa har’a siiti dhiyaachuu fedha. Kitaabonni kuni akka madda dabalataatti, waqayyoo waliin akka atti irraa caalaa walitti siiqu dandeessuuf sii fayyadaa.Yerro qunaamtii atti kirstoos waliin qabdu guddata deemuu humnaa sagalee isattiin haala itti fufaa ta’een jijjiirama deemtaa.
Waqayyoo yaada addaattiif sii uume jira, keenna siif keennee kanaan akka atti dhiibbaa namoota biroo irratti umuu dandeessu barbaada. Karaa atti barabaadachaa jirtuu cufa irratti akka waqayyo madda dabalataa siif keennuu siif kadhannaa.
Waqayyoo siif wantoota kaan kee ta’aan hundaa haa ebbisu,
John fi Lisa Bevere
Akka odefannoo afuuraa kun karaa adda addaa adunyaa keenyaa maratti facaa’ee lafaa waliin gahuu ni barbaada? akkasumas kuni ba’aa keetii? Yoo tajaajila Cloud Library qarshiin deeggaruu barbaadaan karaa getinvolved@cloudlibrary.org email nuuf goodhii. Gargaasa nuuf gutuun hundaaf duraan dursa isii galateeffachuu barbaanna.